Bohemia Cute Butterfly အသေးစားလုံးနားကပ်နှင့်လည်ဆွဲ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်း ၀ ယ်ပါ WoopShop®
$3.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $7.99
သတ္တုအရောင်5634 1226 22 23 24 25 18 19 20 21 14 15 16 17 11 12 13 8 9
Bohemia ချစ်စရာလိပ်ပြာအသေးစားလုံးနားကပ်နှင့်လည်ဆွဲ -5backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
Metals အမျိုးအစား: သွပ်အလွိုင်း
ပစ္စည်းအမည်: Butterfly လုံးနားကပ်
ပစ္စည်း: Acrylic + အလွိုင်း
ပုံစံ / ပုံစံ: လိပ်ပြာ
လိင်: အမျိုးသမီး / မိန်းကလေးများ
အခါသမယ: နေ့စဉ်အသုံးပြုမှု / ပါတီ / သဲသောင်ပြင် / မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် / မင်္ဂလာဆောင် / စေ့စပ်ညှိနှိုင်း
ထိုကဲ့သို့သောစျေးနှုန်းအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပါ! Krasnoyarsk နယ်မြေတွင်တစ်လမပြည့်ခင်ကားမောင်းသည်!
အစာရှောင်ခြင်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်ကြော့နားကပ်ဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အလွန်လှပသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ချစ်စရာ။ ကိယက်ဗ်တွင်, ကှကျရက်ပေါင်း 20 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုယ့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုအရမ်းချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ၊ ရောက်ဖို့ခဏကြာသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါအရမ်းပျော်လိုက်တာပါ